Himalaya Dainik » आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन ,कसरी मनाउदैछन् ?
आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन ,कसरी मनाउदैछन् ?
काठमाडौं – पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आज जन्मदिन परेको छ । उनले आज ७४ औँ जन्मदिन परेको हो । उनले यसबर्ष आफ्नो जन्मदिन नमनाउने भएका छन् । गएको हप्ता उनले यस बर्ष आफ्नो जन्मदिन नमनाउने बताएका थिए । मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त रहेको बेला जन्मदिन मनाउनु राम्रो नहुने भन्दै उनले यसबर्षको जन्मदिन नमनाउने बताएका छन् । जन्मदिनमा उनलाई शुभकामना भने आइरहेको छ । लोकतन्त्र आउनुअघि राजाको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदा हुने गर्दथ्यो । तर २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त अधिकार कटौती गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् , वि.सं. २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, – राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा काम गर्दा मैले कुनै कसैको अधिकार हनन् हुने काम गरिनँ। अहिले पनि म आफ्नो अन्तर्हृदय पोख्दछु कि मैले आफ्नो सात वर्षे त्यो राज्यकालमा जे गरेँ, त्यो तत्कालीन संवैधानिक जटिलता र अवरुद्धताको कार्य कारणमै भएर गरेको हो। अन्यथा मेरा यावत् कार्यकलाप देशहित विरुद्ध थिएनन्।
अनि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, ‘म जुनसुकै हैसियत र अवस्था रहेपनि नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डतामा समर्पित रहने प्रण गर्दछु, किनकि मलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको माया छ।’ अहिले पनि १२ वर्ष अघिको आफ्नो त्यो कथनको स्मरण गर्दै मेरो अन्तर्मन भन्छ,– हाम्रो यो प्यारो देश नेपाल हामी सबै मिलेर ब चाउने हो, बनाउने हो। हामी सबै मिलेर हाम्रो देश सिगार्ने हो अनि हामी सबै जुटेर हाम्रो देशका सबै जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने हो।
प्रकाशित मिति २३ असार २०७७, मंगलवार ०५:२३